धनाढ्य जमिनदारको छोरा सत्यनारायण एक मुस्लिम युवती रसुलियाको प्रेममा परे। ०३१/३२ सालतिर नेपालमा उनको प्रेम दुस्साहस थियो। तर हैसियत, जात, धर्म सबै पर्खाल नाघेर उनको प्रेमले विद्रोह गर्‍यो। अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०२, २०७४०८:१९
आणविक भट्टी खाेल्ने व्यवस्था खारेज गर्न नेकपा भित्रैबाट दबाव ! दर्ता भए संशोधन प्रस्ताव !
डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्दै ! अनसन बस्न पुगे इलाम !
सरुवा गरिएकी स्वास्थ्य सचिवले मन्त्रालय छाडिनन्
जन्ममिति, फैसला, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता विवादमा किन तानिन्छन् प्रधानन्यायाधीश ? यी हुन् अहिलेसम्म विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश
एसईईमा लापरबाही : ९ हजार विद्यार्थीको नतिजा उल्टियो